Mario Ozawa 2022 ပြက္ခဒိန် အခမဲ့လက်ဆောင်
1. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် K9Win အဖွဲ့ဝင် မန်ဘာအားလုံးအတွက် ဖြစ်သည်။
2. အဖွဲ့ဝင်များသည် Maria Ozawa 2022 ပြက္ခဒိန်ကို လက်ခံရရှိရန် ငွေကျပ် 100,000 ပေးသွင်းရပါမည်။
3. ဤအပိုဆုသည် ID / လိပ်စာ / အကောင့်နံပါတ် / IP လိပ်စာ တစ်ကြိမ်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
4. ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်သည် 1x အလှည့်ကျဖြစ်သည်။
5. မန်ဘာဝင်များအနေဖြင့် Pro Free Maria Ozawa 2022 ပြက္ခဒိန်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် Deposit List စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ဤဆုကြေးငွေကို ရယူနိုင်ပါသည်။
6. မန်ဘာဝင်များအနေဖြင့် ဤပရိုမိုးရှင်းကို တောင်းဆိုရန် နှိပ်ပြီးနောက် 15 ရက်အတွင်း ပြက္ခဒိန်တစ်ခု ရရှိပါမည်။
7. မန်ဘာဝင်များသည် K9Win VIA Viber မှတစ်ဆင့် ပြက္ခဒိန်ကို လက်ခံရရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လိပ်စာပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
Maria Ozawa ၏ ပြက္ခဒိန် နမူနာကို ကြည့်ရန် - ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
1. K9Win ၏ ပရိုမိုးရှင်းအချက်အလက်များအားလုံးသည် အကောင့်တစ်ကောင့်လျှင်
တစ်ဦးတစ်ယောက်/ လိပ်စာတစ်နေရာ / အီးမေးလ် / ဖုန်းနံပါတ်နှင့် IP လိပ်စာတစ်ခုအတွက်သာ ဖြစ်သည်။
2. K9Win မှ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် သဘောတူညီမှုများအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့် ရှိသည်။
3. K9Win အဖွဲ့အစည်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်သာလျှင် အတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
4. ရိုလက် တိုက်ရိုက်ကာစီနိုသည် တစ်ခါထိုး 26 ဂဏန်း ထက်နည်းပြီးထိုးပါက လည်ပတ်ငွေ(Turnover) အဖြစ် သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ
5. ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်၊ စုံ/မ နှင့် HDP ဘော်ဒီ(နှစ်သင်း) လောင်းခြင်းတို့အား Turnover(ကြိမ်ရေ)အဖြစ်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ
6. 0.85 ထက်နည်းသောလောင်းကြေးများအား Turnover(ကြိမ်ရေ)အဖြစ်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ
7. Draw Game(သရေ) သိုမဟုတ် Tie Game ဖြစ်ခဲ့ပါက Turnover(ကြိမ်ရေ) တွက်ရာတွင် မထည့်တွက်ပါ
100 ယူနစ်ငွေသွင်းပြီး စလော့ဟက်ကာ အခမဲ့ရယူလိုက်ပါ
1. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် K9Win ၏ မန်ဘာအားလုံးအတွက်ဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်
2. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် စလော့ဂိမ်းတစ်ခုတည်းသာ ကစားခွင့်ပြုသည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် ID/Address/Account Number/IP Address တစ်ခုအတွက်သာဖြစ်သည်
4. ဘောနပ်အား5ဆပြည့်မှငွေပြန်ထုတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်
5. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် လည်ပတ်ငွေတစ်ဆ ဆော့ကစားပြီးမှ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်
* အေဂျင့် အကောင့်ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို၏ အေဂျင့် ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ *
ဝက်ဆိုက် : https://k9mmk.com/
Viber : https://cutt.ly/hPhDDqv
၁၀၀ယူနစ် ငွေသွင်းပြီး အရေအတွက်အကန့်အသတ်ဖြစ်အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ပါဝါဘဏ်ကို ဖရီးရယူလိုက်ပါ
2. မန်ဘာသည် အရေအတွက်အကန့်အသတ်ဖြစ်အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ပါဝါဘဏ်ကို ဖရီးရလက်ခံရယူနိုင်ရန် ၁၀၀ယူနစ် ငွေသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းအချက်အလက်များအားလုံးသည် အကောင့်တစ်ကောင့်လျှင် တစ်ဦးတစ်ယောက်/ လိပ်စာတစ်နေရာ / အီးမေးလ် / ဖုန်းနံပါတ်နှင့် IP လိပ်စာတစ်ခုအတွက်သာ ဖြစ်သည်
4. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် ကြိမ်ရေ(Turnover)တစ်ဆ ဆော့ကစားပြီးမှ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်
5. မန်ဘာသည် ငွေစာရင်းသွင်းသည့်အခါ အရေအတွက်အကန့်အသတ်ဖြစ်အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ပါဝါဘဏ်ကို ဖရီးရယူလိုက်ပါ ပရိုမိုးရှင်းအားတစ်ခါတည်းရွေးချယ်ရယူနိုင်ပါသည်
6. မန်ဘာဝင်များအနေဖြင့် ဤပရိုမိုးရှင်းကို တောင်းဆိုပြီး 15 ရက်အတွင်း လက်ခံရရှိပါမည်
7. မန်ဘာဝင်များသည် K9Win Viber မှတစ်ဆင့် အရေအတွက်အကန့်အသတ်ဖြစ်အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ပါဝါဘဏ်ကို လက်ခံရရှိရန်အတွက် လိပ်စာပေးရန်လိုအပ်ပါသည်
100,000 ကျပ် နှင့်အထက် ငွေသွင်းပါက အကန့်အသတ်ဖြစ်အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ဂျာစီတစ်ထည်ဖရီးရယူလိုက်ပါ
2. ဤပရိုမိုးရှင်းအားရရှိရန် အနည်းဆုံးငွေ 100,000 ကျပ် သွင်းရမည်ဖြစ်သည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းအား ID လိပ်စာ အကောင့်နံပါတ် IP တစ်ခုလျှင် တစ်ကြိမ်တည်းသာလက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်
4. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် လည်ပတ်ငွေတစ်ဆ ဆော့ကစားပြီးမှ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်
5. Player သည်ငွေသွင်းချိန်တွင် ဤပရိုမိုးရှင်းအား 100,000ကျပ် ငွေသွင်း အကန့်အသတ်ဖြစ်အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ဂျာစီတစ်ထည်ဖရီး ကိုတစ်ခါတည်းရွေးချယ်ရပါမည်
6. Player သည် ပရိုမိုးရှင်းရယူပြီး 10 ရက်အတွင်းအင်္ကျီအားရရှိမည်ဖြစ်သည်
ဘောလုံးပွဲစဉ်များအတွက် 300% အထူးပြန်အမ်းငွေ
2. ဘောလုံးပွဲစဉ်ရဲ့ 1.5 (1 ဂိုးသွင်း အပြည့် ရှုံး၊ 2ဂိုးသွင်းအပြည့်နိုင်) ကြေး ကြေးကြောသည့်အသင်းမှ လောင်းရမည်ဖြစ်ပြီး
လောင်းပြီးသည့်ငါးမိနစ်အတွင်း ကြေးအကြောခံရသည့်အသင်းမှ ဂိုးသွင်းမှသာ ဆုကြေးအားရရှိမည်ဖြစ်သည်"
3. မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ5မိနစ်အတွင်း ကြေးပေးခံရသောအသင်းမှ ဂိုးသွင်းပါကပြန်အမ်းငွေ 300% ရရှိပြီး အမြင့်ဆုံးပမာဏ 5သိန်းအထိ ရယူနိုင်ပါသည်
- ကြေးပေးခံရသော အသင်းမှ ခန့်မှန်းချိန်5 မိနစ်အတွင်း 1 ဂိုးသွင်းပါက 100%ပြန်အမ်းငွေရရှိပြီး 150,000(1သိန်းခွဲ)ကျပ်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်
- ကြေးပေးခံရသော အသင်းမှ ခန့်မှန်းချိန်5 မိနစ်အတွင်း2ဂိုးသွင်းပါက 200%ပြန်အမ်းငွေရရှိပြီး 300,000(3သိန်း)ကျပ်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်
- ကြေးပေးခံရသော အသင်းမှ ခန့်မှန်းချိန်5 မိနစ်အတွင်း3ဂိုးသွင်းပါက 300%ပြန်အမ်းငွေရရှိပြီး 500,000(5သိန်း)ကျပ်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်
4. ဤပြန်အမ်းငွေပရိုမိုးရှင်းသည် လိဂ်5ခုအတွက်သာဖြစ်သည်။( EPL , SPAIN LA LIGA, ITALY SERIES A, GERMAN BUNDESLIGA, FRANCE LIGUE 1)
5. ပြိုင်ပွဲမစတင်မီ လောင်းရပါမည် ဒါမှမဟုတ် ပွဲစပြီး5မိနစ်နောက်ပိုင်း လောင်းမှသာ ဝဘ်ဆိုက်မှလက်ခံမည်ဖြစ်သည်
6. ဂိုးရလဒ်သည် ဝဘ်ဆိုက်ထဲတွင် အတည်ပြုထားသော အလျော်အစားသာဖြစ်သည်
7. ပြန်အမ်းငွေကို ရယူရန်အတွက် မိမိလောင်းထားသည့်ပွဲစဉ်ကို စခွင်ရှော့ရိုက်ပြီး customer service သို့ ပေးပို့ရပါမည်
8. ဤပြန်အမ်းငွေပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ယူထားပါက လည်ပတ်ငွေ5ဆပြည့်ပြီးမှသာ ငွေထုတ်နိုင်ပါမည်
9. ဤပြန်အမ်းငွေပရိုမိုးရှင်းသည် မန်ဘာအားလုံး နေ့စဉ်ရယူနိုင်ပြီး တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာထုတ်ယူနိုင်ပါသည်
7. Draw Game(သရေ) သို့မဟုတ် Tie Game ဖြစ်ခဲ့ပါက Turnover(ကြိမ်ရေ) တွက်ရာတွင် မထည့်တွက်ပါ
ဂိမ်းအစီအစဉ်များနှင့် ပရိုမိုးရှင်းများအတွက် K9Win အဖွဲ့သို့ ၀င်ပါ
K9Win မှ အပတ်တိုင်းနောက်ထပ် giveaway များနှင့် ဆုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပါ
ဘောလုံး : https://www.facebook.com/groups/k9winball/
စလော့ဂိမ်းနှင့် ကာစီနိုဂိမ်းများ : https://www.facebook.com/groups/k9winmmslot/
ပရိုဂရမ် Lucky Spin အမြင့်ဆုံးဆုကြေး 200,000 ကျပ်
1. ဒီပရိုမိုးရှင်းသည် အပတ်တိုင်း တနင်္လာနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့ထိဖြစ်သည်
2. Lucky Spin ပရိုဂရမ်သည် အပတ်စဉ် ည 19.00 နာရီ တနလာၤနေ့တိုင်း Facebook ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်လှည့်မည်ဖြစ်သည်
Official Facebook : https://www.facebook.com/sonriealbuenhumor
3. Lucky Spin ပရိုဂရမ်တွင် ပါဝင်ချင်သူသည်အနည်းဆုံး ငွေ 5,000ကျပ် စတင်သွင်း၍ ပါဝင်နိုင်ပါသည်
ပထမဆု ဆုငွေ 70,000 ကျပ်
ဒုတိယဆု ဆုငွေ 35,000 ကျပ်
တတိယဆုကြေး ဆုငွေ 15,000 ကျပ်
နှစ်သိမ့်ဆု ဆုငွေ 8,000 ကျပ် 10 ယောက်
5. ဆုငွေများသည် လူကြီးမင်း၏အကောင့်ယူနစ်ထဲသို့ဝင်မည်ဖြစ်သည်
6. ဆုငွေများထုတ်မည်ဆိုပါက ကြိမ်ရေ(Turnover)5ဆဖြစ်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်
သူငယ်ချင်းမိတ်ဆက်ပါက ဖရီးဘောနပ် 20,000 ကျပ်
2. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကာစီနိုဂိမ်းကစားပါက ကြိမ်ရေ(Turnover) 25 ဆဖြစ်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်နှင့် Sportsbook နှင့် Slot Game ဂိမ်းကစားပါက ကြိမ်ရေ(Turnover)5ဆ ဖြစ်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်
4. အမြင့်ဆုံးဘောနပ် 20,000ကျပ်
သူငယ်ချင်းမှပထမဆုံး ငွေ 10,000 ကျပ်သွင်းပါက
4. ဤပရိုမိုးရှင်းအားငွေသွင်းပြီး3ရက်အတွင်းတောင်းဆိုရမည်ဖြစ်သည်
K9Win ၏ အကြီးတန်းကိုယ်စားလှယ်ကိုခေါ်ယူခြင်
*အားကစားများအတွက် Grade A
Viber : 09795341188
25,000 ကျပ် နှင့်အထက် ငွေသွင်းပါက 2021/22 ဘောလုံးအင်္ကျီ ရရှိပါမည်
2. ဤပရိုမိုးရှင်းအားရရှိရန် အနည်းဆုံးငွေ 25,000 ကျပ် သွင်းရမည်ဖြစ်သည်
4. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်နှင့် တိုက်ရိုက်ကာစီနိုဂိမ်းကစားပါက ကြိမ်ရေ(Turnover) 1 ဆကစားပြီးမှငွေထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်
5. Player သည်ငွေသွင်းချိန်တွင် ဤပရိုမိုးရှင်းအား 25,000ကျပ် ငွေသွင်း 2021/2022ဘောလုံးအင်္ကျီတစ်ထည်ရယူမည် ဟုရွေးပြီးရယူနိုင်ပါသည်
မန်ဘာသစ် 8,000ကျပ် ငွေသွင်း 10,000ကျပ် ဖရီး (5ဆ) စလော့ဂိမ်းတစ်ခုသာကစားနိုင်သည်
2. ဤပရိုမိုးရှင်းအား ပထမတစ်ကြိမ်ငွေသွင်းသည့်အချိန်မှာသာလက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်ရယူရန်အတွက် အနည်းဆုံး 8,000 ကျပ်မှစတင်ငွေသွင်းရမည်ဖြစ်သည်
4. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်သည် ကြိမ်ရေ(Turnover)5ဆပြည့်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
သွင်းငွေ 8,000ကျပ် + ဘောနပ် 10,000ကျပ် = 18,000ကျပ်
လည်ပတ်ငွေ 18,000ကျပ် x 5ဆ = 90,000ကျပ်
5. အမြင့်ဆုံးဘောနပ် 18,000ကျပ်အထိ
6. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် စလော့ဂိမ်းတစ်ခုတည်းသာ ကစားခွင့်ပြုသည်
5. Draw Game(သရေ) သိုမဟုတ် Tie Game ဖြစ်ခဲ့ပါက Turnover(ကြိမ်ရေ) တွက်ရာတွင် မထည့်တွက်ပါ
100% ဘောနပ်စ်အစီအစဉ်မှ ကြိုဆိုပါ၏
1. ဘောနပ်စ် 100% သည် ပထမဆုံးအကြိမ်ငွေသွင်းမည့်အချိန်သာ ရမည်ဖြစ်သည်
2. အနည်းဆုံး ငွေ 10,000 ကျပ်သွင်းရမည်
3. အမြင့်ဆုံးဘောနပ်စ် 250,000 ကျပ်
4. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်သည် ကြိမ်ရေ(Turnover) 20 ဆပြည့်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
A မှ ငွေ 10,000 ကျပ်သွင်းပါက ခရစ်ဒစ် 10,000 + ဘောနပ်စ် 10,000 = 20,000 ကျပ် ရရှိမည်ဖြစ်သည်
ကစားသည့်ငွေပမာဏစုစုပေါင်း(ဆ 20) 20,000 x 20 = 400,000 နှင့် ညီမျှရမည်
စနေ တနင်္ဂနွေ ဘောနပ် 50% (အမြင့်ဆုံး 150,00ကျပ်) 15ဆ ဖြစ်ရမည်
2. ဤပရိုမိုးရှင်းအား စနေ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်အတွင်းသာရရှိမည်ဖြစ်သည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းအား တစ်ရက်တစ်ကြိမ်သာလက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်
4. ဤပရိုမိုးရှင်းအားရရှိရန် အနည်းဆုံးငွေ 10,000 ကျပ် သွင်းရမည်ဖြစ်သည်
5. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်သည် ကြိမ်ရေ(Turnover) 15 ဆပြည့်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
သွင်းငွေ 10,000ကျပ် + ဘောနပ် 5,000ကျပ် = 15,000ကျပ်
လည်ပတ်ငွေ 15,000ကျပ် x 15ဆ = 225,000ကျပ်
6. အမြင့်ဆုံးဘောနပ် 15,000ကျပ်
7. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်အား K9Win ၏ ဂိမ်းတိုင်းကစားနိုင်သည်
100,000ကျပ် ငွေသွင်း 18,000ကျပ် ဖရီး (5ဆ) စလော့ဂိမ်းတစ်ခုသာကစားနိုင်သည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းအား တစ်ကြိမ်တည်းသာလက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်
4. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်ရယူရန်အတွက် အနည်းဆုံး 100,000 ကျပ်မှစတင်ငွေသွင်းရမည်ဖြစ်သည်
5. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်သည် ကြိမ်ရေ(Turnover)5ဆပြည့်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
သွင်းငွေ 100,000ကျပ် + ဘောနပ် 18,000ကျပ် = 118,000ကျပ်
လည်ပတ်ငွေ 118,000ကျပ် x 5ဆ = 590,000ကျပ်
6. အမြင့်ဆုံးဘောနပ် 18,000ကျပ်အထိ"
50,000ကျပ် ငွေသွင်း 8,000ကျပ် ဖရီး (5ဆ) စလော့ဂိမ်းတစ်ခုသာကစားနိုင်သည်
4. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်ရယူရန်အတွက် အနည်းဆုံး 50,000 ကျပ်မှစတင်ငွေသွင်းရမည်ဖြစ်သည်
သွင်းငွေ 50,000ကျပ် + ဘောနပ် 8,000ကျပ် = 58,000ကျပ်
လည်ပတ်ငွေ 58,000ကျပ် x 5ဆ = 290,000ကျပ်
6. အမြင့်ဆုံးဘောနပ် 8,000ကျပ်အထိ"
1. အနည်းဆုံး ငွေ 10,000 ကျပ်သွင်းရမည်
2. အမြင့်ဆုံးဘောနပ်စ် 150,000 ကျပ်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်သည် ကြိမ်ရေ(Turnover) 10 ဆပြည့်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
A မှ ငွေ 10,000 ကျပ်သွင်းပါက ခရစ်ဒစ် 10,000 + ဘောနပ်စ် 2,000 = 12,000 ကျပ် ရရှိမည်ဖြစ်သည်
ကစားသည့်ငွေပမာဏစုစုပေါင်း(ဆ 10) 12,000 x 10 = 120,000 နှင့် ညီမျှရမည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်သည် ကြိမ်ရေ(Turnover) 8 ဆပြည့်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
A မှ ငွေ 10,000 ကျပ်သွင်းပါက ခရစ်ဒစ် 10,000 + ဘောနပ်စ် 1,000 = 11,000 ကျပ် ရရှိမည်ဖြစ်သည်
ကစားသည့်ငွေပမာဏစုစုပေါင်း(8 ဆ) 11,000 x 8 = 88,000 နှင့် ညီမျှရမည်
နေ့စဉ်ရှုံးငွေ၏ 5% ပြန်လည်ရရှိခြင်း (1ဆ) အမြင့်ဆုံး 500,000 ကျပ်
2. မန်ဘာမှဤပရိုမိုးရှင်း 5% အားနေ့စဉ် 01:00AM - 01:00 PM အထိဖြစ်သည်
3. ပြန်လည်ရရှိမည့်ငွေသည် နေ့စဉ် 01:00 - 12:59:59 နာရီအတွင်းဖြစ်သည်
4. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာရရှိမည်ဖြစ်သည်
5. ငွေသွင်းပရိုမိုရှင်းအားလျှောက်ထားပြီးသောသူများသည် ဤပရိုမိုးရှင်းအားလျှောက်ထား၍မရပါ
6. ဤပရိုမိုးရှင်းတွင် အနည်းဆုံးတောင်းဆိုချက်မရှိပါ
7. မန်ဘာမှ အထူးအစီစဉ်စာမျက်နှာအားဝင်ပါ > နေ့စဉ် 5% ရရှိခြင်း > ဘောနပ်ရယူခြင်း
8. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် တစ်ဆ ဆော့ကစားပြီးမှ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်
9. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် အမြင့်ဆုံး 500,000 ကျပ် အထိပြန်လည်ရယူနိုင်သည်
10. ရိုလက် တိုက်ရိုက်ကာစီနိုသည် တစ်ခါထိုး 26 ဂဏန်း ထက်နည်းပြီးထိုးပါက လည်ပတ်ငွေ(Turnover) အဖြစ် သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ
11. ဂိုးပေါ်/ဂိုးအောက်၊ စုံ/မ နှင့် HDP ဘော်ဒီ(နှစ်သင်း) လောင်းခြင်းတို့အား Turnover(ကြိမ်ရေ)အဖြစ်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ
12. 0.85 ထက်နည်းသောလောင်းကြေးများအား Turnover(ကြိမ်ရေ)အဖြစ်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ
13. Draw Game(သရေ) သိုမဟုတ် Tie Game ဖြစ်ခဲ့ပါက Turnover(ကြိမ်ရေ) တွက်ရာတွင် မထည့်တွက်ပါ
အားကစား ပြန်အမ်းငွေ 0.5%
1. ပြန်အမ်းငွေအား မြန်မာနာရီ 00:29:59 - 00:29:59 မှတွက်ပေးသည်။
2. နေ့လည်တစ်နာရီနောက်ပိုင်းမှစ၍ အားကစားလောင်းကြေးများ အော်တိုဝင်မည်ဖြစ်သည်။
3. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်စ်ရရှိရန်အတွက် လောင်းကြေးအနည်းအများ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
ဘောလုံးလောင်းကြေး 5,000 ( HDP ဘော်ဒီကြေး/OU လောင်းကြေး၊ အပေါ် - အောက် )
အပေါ် (သို့) အောက် 0.5% ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး သရေသာလျှင် ဘောနပ်စ် မရရှိနိုင်ပါ။
Live ကာစီနို လျှော့ငွေ 0.5%
1. ပြန်အမ်းငွေအား မြန်မာနာရီ 00:29:59 - 00:29:59 မှ တွက်ပေးသည်။
2. Customer မှ ပရိုမိုးရှင်းလောင်းကြေးအား မြန်မာနာရီ 00:30 - 12:30 မှ စတင်ထိုးနိုင်သည်။
3. ဤပရိုမိုရှင်းသည် လောင်းကြေး ကြိမ်ရေမရှိပါ။
4. 12 နာရီအတွင်း ဤပရိုမိုးရှင်းအား ရယူနိုင်သည်။
5. လက်ခံရယူသည့်အချိန် 12:30 နာရီထက်ကျော်လွန်ပါက ဤပရိုမိုးရှင်း ရယူ၍ မရပါ။
6. ပရိုမိုးရှင်းစာမျက်နှာအား Customer မှတိုက်ရိုက်ဝင်နိုင်သည် > လောင်းကြေးမှ 0.50% ပြန်ပေးသည် > ဘောနပ်စ်ရယူပါ
7. ဤပရိုမိုးရှင်းတွင် လောင်းကြေးအနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးမရှိပါ။
စလော့ဂိမ်း လျှော့ငွေ 0.5%
ထိုင်းငွေဖြင့် ကစားမည့်သူများအတွက် ပရိုမိုးရှင်း
** 50% ဘောနပ်စ် အစီအစဉ်မှ ကြိုဆိုပါ၏ - လည်ပတ်ငွေ (Turnover) x 20 ဆ
** ငွေသွင်း 300 ဘတ် အခမဲ့ 60 ဘတ် - လည်ပတ်ငွေ (Turnover) x 25 ဆ
** ငွေသွင်း 1,000 ဘတ် အခမဲ့ 200 ဘတ် - လည်ပတ်ငွေ (Turnover) x 25 ဆ
** ငွေသွင်း 500 ဘတ် အခမဲ့ 100 ဘတ် - လည်ပတ်ငွေ (Turnover) x 25 ဆ
** အပိုဆု 8% - လည်ပတ်ငွေ (Turnover) x 8 ဆ
1. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် တစ်နှစ်တွင်တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်
2. ဤပရိုမိုးရှင်းအား မိမိမွေးလတွင်သာတောင်းဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းအား ရယူရန်အတွက် ကစားသမားများသည် မိမိ၏ သက်သေခံကတ်ပြားကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Viber/Telegram သို့ ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါသည်
4.သက်သေခံကတ်ပြားအား စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးမှ ဘောနပ်အားလက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်
5. မွေးနေ့ဘောနပ်ဆုကြေးအသေးစိတ်အားအောက်တွင်ပါရှိသော ဇယားတွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်
6. အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အတွက် သင်၏ K9Win အကောင့်တွက်လက်ကျန်ငွေ3ယူနစ်အနည်းဆုံးကျန်ရှိရပါမည်
7. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်သည် ကြိမ်ရေ(Turnover)5ဆပြည့်မှ ငွေထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
ကစားသည့်ငွေပမာဏစုစုပေါင်း(5 ဆ) 20,000 x5= 100,000 နှင့် ညီမျှရမည်
**နောက်ဆုံး3လ စုစုပေါင်း ငွေသွင်း 8 ကြိမ် ယူနစ် 20 ရယူပါ
အားကစားအတွက် အပတ်စဉ် စနေ တနင်္ဂနွေ အထူးပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်စ်
2. ဤပရိုမိုးရှင်းအား စနေ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်အတွင်းတစ်ရက်တစ်ကြိမ်သာရရှိမည်ဖြစ်သည်
3. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် ကြိမ်ရေ(Turnover)တစ်ဆ ဆော့ကစားပြီးမှ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်
4. 20,000 ဖရီး 2,000 , 30,000 ဖရီး 3,000 , 50,000 ဖရီး 5,000 မန်ဘာမှတစ်ခုတည်းသာရွေးချယ်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်
စနေ တနင်္ဂနွေ အထူးပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်စ်
**20,000ငွေသွင်း 2,000 ဖရီး
**30,000ငွေသွင်း 3,000 ဖရီး
**50,000ငွေသွင်း 5,000 ဖရီး
5. ဤပရိုမိုးရှင်းအမြင့်ဆုံးဘောနပ်စ်သည် 5,000ကျပ်ဖြစ်သည်
6. ဤပရိုမိုးရှင်းဘောနပ်စ်အား အားကစားတစ်ခုသာကစားနိုင်သည်
အားကစားအတွက် အပတ်စဉ်ဘောနပ်စ် 20,000 ဖရီး 2,000
အားကစားအတွက် အပတ်စဉ်ဘောနပ်စ် 30,000 ဖရီး 3,000
အားကစားအတွက် အပတ်စဉ်ဘောနပ်စ် 50,000 ဖရီး 5,000